कोकाकोला कसरी बन्छ ? संसारमा २ जनालाई मात्र थाहा छ ! को हुन् उनीहरु ? – eSidhakura
मुख्य पृष्ठरोचककोकाकोला कसरी बन्छ ? संसारमा २ जनालाई मात्र थाहा छ ! को हुन् उनीहरु ?
बिहान उठ्ने वित्तिकै बिहान खाली पेटमा चिया पिउदा क्या’न्सरको कारण